Lalao Briny aterineto. Play maimaim-poana
Lalao Briny an-tserasera
Lalao Online Games ho an'ny ankizy Puzzle Tetris 7 taona Manan-tsaina Ny Fanabeazana Html5
Teo imason'i tena mahaliana mamelabelatra lalao mitovy amin'ny Tetris. Ny maha dia hanadio ny birao avy amin'ny biriky amin'ny isa. Tao amin'ny cubes miloko isan-karazany nohosorany loko mainty danja maro avy amin'ny iray ny folo, ary teo an-tampon'ny ny tontonana mampiseho ny habetsahan'ny isa tianao ho manolotra haingana araka izay azo atao. Ampiana na analana cubes ny mitovy loko mba hahazo ny vokatra tsara. Vata hazo mianjera amin'ny baomba nilatsaka swoop fanampiana mazava amin'ny sehatry ny tsy ilaina ny tsikombakomba, tandremo.